Afeef - Million Marayaal
Dhammaan calaamadaha ganacsiga, astaamaha, iyo calaamadaha adeegga la soo bandhigay waa la diiwaangeliyay iyo / ama Calaamadaha aan la diiwaan-gelin ee milkiilayaashooda. Dhalmada dhammaan ama qaab kasta oo aan fasax qoraal ah laga haysan waa mamnuuc. Dhamaan Xuquuqda Ayaa Leh.
Macluumaadka lagu bixiyay degelkan waxaa loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya, sidaa darteed, dadka isticmaala / booqdayaashu waa inaysan sameyn wax go'aan ah oo ku saleysan. Waxaa si weyn loogu talinayaa in dhammaan isticmaaleyaashu ay raadsadaan talobixin khabiir madax-bannaan ka hor inta aan la gaarin wax go'aanno ah oo leh saameyn dhaqaale, anshax ama sharci. Shirkadda mas'uul kama aha wixii khilaafaad ama khalad ah ee ku jira macluumaadka la bixiyey. Shirkaddu waxay noqon kartaa ama noqon kartaa bixiyaha dhabta ah ee adeegyada la sheegay, sababtaas darteed, Shirkadda ayaa mas'uul ka ah oo keliya maaraynta adeegga bixinta iyadoo la raacayo xiriir kasta oo qandaraas ah.
The MilyanMaker.com websaydhka waxaa lagu bixiyaa "AS IS" iyo "AS heli karo" iyada oo aan wax matalaad ah ama oggolaansho la samayn iyo iyada oo aan la helin damaanad qaad nooc kasta ha ahaadee mid la muujiyey ama mid la soo koobay, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn dammaanadaha la muujiyay ee tayada qanacsan, jirdhis ujeedo gaar ah, xadgudub la'aan, iswaafajin, nabadgelyo iyo saxnaan. Wax kasta iyo dhammaan mas'uuliyadaha ka dhalan kara gelitaankaaga iyo adeegsiga degelladayada, ha ahaato dayacaad, jebinta waajibaadka ama si kale, ayaa laga reebay xadka ugu badan ee sharcigu oggol yahay.
Waxyaabaha ku jira MilyanMaker.com websaydhada waxaa loogu talagalay macluumaad guud oo keliya mana aha mid sharciyeed ama talo xirfadle ah. Daryeel kasta oo macquul ah ayaa loo qaaday si loo hubiyo in macluumaadka lagu soo qoro websaydhadeena inay sax yihiin oo cusboonaysiin yihiin, mana aqbali karno mas'uuliyada wixii cawaaqib xumo ah ee ka dhasha ku tiirsanaanta ama adeegsiga macluumaadka guud ee noocaas ah. Adeegsigaaga mid ka mid ah boggaga internetka ma abuurayo qareen / lataliye / lataliye - xiriir macmiil lala yeesho MilyanMakers.com, sidoo kale adeegsiga noocan ahi ma noqonayo helitaanka sharci ama talo kale oo xirfadle ah oo ka socota MilyanMakers.com. Dhammaan isticmaaleyaasha websaydhadeenna, ha ahaadaan ama yaanay isticmaaluhuba ahayn macaamiisha jira ee MillionMakers.com, waxaa lagula talinayaa inay nala soo xiriiraan iyo / ama inay qaataan talobixin xirfadeed oo ku habboon ka hor intaanay isku kicin ficil kasta ama qaadan wax go'aan ah oo ku saabsan adeegyada la codsaday.
Iskuduwaha iyo Adeegyada Qaabeynta LLC
Wadajirka iyo Adeegyada Aasaasiga ah ee LLC waxaa ka mid ah diyaarinta iyo xareynta dukumiintiyada sameynta ee gobolkaaga, oo ku saleysan kaliya macluumaadka aad bixiso ee aad ku dalbaneyso adeegga waana in lagu soo gudbiyaa adiga oo qatar u ah. U gudbinta dukumiintiyada sameynta shirkadda ee gobolkaaga, MILLION MAKERS ma sameyn doonaan wax damaanad qaad ah ama isku day ah inay hubiyaan in macluumaadka dukumiintiyada sameynta ay sax yihiin, ku habboon yihiin ama dhameystiran yihiin. Sidoo kale waa masuuliyadaada inaad hesho oo aad sii wadato ogolaanshaha ka hor inta aadan magacaabin wakiilka diiwaangashan / deganaha shirkaddaada. Dheeraad ah, annaga mas'uul kama nihin hubinta in dhammaan isku-darka gobolkaaga ama shuruudaha sameynta LLC la dhammaystiray, sidoo kale masuul kama nihin inaan kula talinno ama ku xusuusinno wixii shuruudo ama waajibaad ah, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn gobol kasta oo loo baahan yahay ama diiwaangelinta Federaalka, warbixinnada sanadlaha ah, canshuurta laga rabo. Intaas waxaa sii dheer, ka hor intaadan adeegyadeenna adeegsan, waa adiga keliya masuuliyaddaada inaad u xusho Foomka Shirkadeed ee meheraddaada (C-Corporation, S-Corporation, LLC, Partnership, Private Limited or Limited).
Joojinta Amarka Adeegga
Haddii amar kasta oo adeegyadayada ah la joojiyo ka dib markaan helno lacag bixinta, markaa lacagta oo dhan waa la soo celin doonaa marka laga reebo khidmadda $ 50.00. Amarkii kasta oo qayb ahaan laga hawl galiyay dib looma celin karo.
MAKIILADA MAADADA MA AH SHARCIYADA SHARCIGA. MILLION MAKERS waa dukumiinti dukumiinti ah iyo shirkad baaris oo keliya. Macluumaadka lagu bixiyay MilyanMakers.com waxaa loo bixiyaa ujeeddooyin macluumaad oo guud oo keliya. Websaydhka, MilyanMakers.com, waxaa iska leh oo ka shaqeeya MM LLC. Sida kor lagu soo sheegay, MM LLC (oo ay ku jiraan adeegyada lagu bixiyo MilyanMakers.com) ma ahan shirkad qaanuun, mana ahan in midkoodna shaqaalaha MILLION MAKERS u dhaqmo sidii qareenkaaga, duruufna ma ahan in macluumaadka lagu soo qoro bartaan ama xiriir kasta oo shaqaale ee MILAADKA MAKERS loo dhiso sidii talo sharciyeed. Intaa waxaa sii dheer, macluumaadkan looguma talagalin oo waa inuusan u adeegin badal ahaan talo sharciyeed. Sababtoo ah sharciga ayaa si joogto ah isu beddelaya, macluumaadka ku saabsan boggan looma dammaanad qaadi karo inuu sax yahay, dhammeystiran yahay ama uu hadda yahay. Waxaa lagugula talinayaa inaad aragto qareen ku saabsan adeegyadaada socdaalka, adeegyada waxbarashada, sameynta meheradda, calaamadaha ganacsiga, rukhsadaha ganacsiga, la tashiga dhaqaalaha, adeegyada guryaha, iibka, ama haddii aad qabtid su'aalo gaar ah oo aan lagaran karin bartaan ama haddii aad u baahatid heerka sare ee hubinta.
Xadidaadaha Waxyeelada. Qiyaasta Halista. Diidmada Warranties.
MILIIL MAKERS wuxuu qaataa wax mas'uuliyad ah wixii waxyeelo ah ee aad soo aragto, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidneyn, khaladaadka, la tirtiray, luminta xogta, daahitaanka howlgalka ama gudbinta, keenis la'aanta, tirtirka faylalka ama emaylka, khaladaadka, cilladaha, kombiyuutarka Fayrasyada, ama carqaladeynta adeegga nooc kasta ha noqotee, ama wax kasta oo ku dhaca waxqabadka, guuldarrooyinka isgaarsiinta, xatooyo, burburin ama marin aan loo fasaxin diiwaangelinta MILLION MAKERS, barnaamij, macluumaad ama adeegyo. MASHAADADADKA Milyaniga ayaa qaadaya wax mas'uuliyad ah kama saarna tayada, saxnaanta, ama ansaxnimada xogta / macluumaadka la soo uruuriyay iyadoo la adeegsanaayo mid ka mid ah adeegyadeena. Adeegsiga macluumaadka laga soo ururiyey adeegyada 'MILLION MAKERS' ayaa qatar kuugu jira. Talo bixin hadal ah ama macluumaad qoraal ah ee ay bixiso MILLION MAKERS, shaqaalaheeda, wakiiladooda, bixiyeyaasha qeybta sedexaad, alaab-qeybiyeyaasha, shatiyeyaasha ama wixii la mid ah, ma abuuri karaan dammaanad ama shati; sidoo kale xaq uma lihid inaad ku tiirsanaato macluumaadkaas iyo talooyinka noocaas ah.
Waxaad u qaadataa mas'uuliyadda guud iyo halista adeegsiga adeegyada MILLION MAKERS. MAKIILADA MAADADA ma ballanqaadayso saxnaanta ama dhammaystirka macluumaadka ay ka kooban yihiin adeegyadeeda. Adeegyada Milyan Millioner waxaa lagu bixiyaa “sidii la rabay”, iyo “intii la heli karo”. Adiga ayaa mas'uul ka ah inaad qiimeyso sax ahaanta, dhameystirka iyo waxtar u lahaanta dhammaan macluumaadka iyo natiijooyinka raadinta ee laga helo websaydhkeena ama hadal ahaan ay u soo gudbiyaan shaqaalaha MILLION MAKERS.
Ma jiraan wax matalaya ama dammaanad qaadis ah, oo la qeexayo ama la macno ah, oo la soo saaray oo ku saabsan sharciga ama cawaaqib kasta oo ka dhalata adeegsiga adeegyadeena. Waajibaadka MILION MAKERS ee sheegashada ka dhasha adeegsiga adeegyadeena ayaa ku kooban oo keliya qaddarka dhab ahaan loo siiyay MILLION MAKERS adeegsigaas. Dhammaan sheegashooyinka sharciga ah ee ka soo baxa adeegsiga adeegyadeena waa in lagu dacweeyaa maxkamadaha Belize
Haddii ay dhacdo in qodobbada mid ka mid ah lagu diidayo xukunkan loo adeegsaday mid aan la fulin karin, qodobbadaas waa in la xaddido ama laga baabi'iyo illaa inta ugu yar ee lagama maarmaanka u ah in heshiiskani haddii kale sii ahaanayo mid sii jira oo dhaqan gala.